CUNTO CAGAARAN: MARKA AY SUURTOGAL TAHAY IN DHULKA LA FURO, WAXA GO'AAMINAYA MUDDADAN, SIDA LOO ABUURO ABUURKA, IYADA OO LA TIXGELINAYO MASHAARIICDA IYO TEKNOOLAJIYADA, WAA MAXAY DARYEELKA SII KORDHAYA EE GEEDO? - BEER CAGAARAN
Koritaanka cawska cagaaran: doorashada ee kala duwan iyo diyaarinta, iyo sidoo kale marka la gooyo iyo sida loo sameeyo si sax ah?
Dabocase cagaaran waa dhaqan dhaqaale oo la awoodi karo oo dhaqso leh oo ku dhex yaal beeraleyda iyo beeraleyda.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay fitamiin iyo macdanta ayaa u oggolaanaya in dhirta loo tixgeliyo in ay tahay mid aan loo baahnayn in lagu diyaariyo suxuunta khudradda badan, ka hortagga hypovitaminosis iyo cudurrada kala duwan, iyo nolosheeda khudrada ah waxay ka dhigtaa khudradda ku haboon inay isticmaasho oo dhadhan fiican leh sannad kasta. Waa sifooyinka noocaas ah in dhammaan bannaanka u jecel dabocase cagaaran.
Noocyada khudaarta sii kordhaya
Beer u baahan tahay abuurka qoyan. Seeds aan la qooyey waxay u baxi karaan waqti dheer ama ma yaryahay. Ka hor inta beerto, miraha waa in lagu daaweeyaa xal of boric acid iyo ridomil, kuwaas oo leh guryaha hodanka fungicidal, si loo ilaaliyo dhirta.
Beerto waxaa lagu sameeyaa ceelasha ama grooves leh koox ka mid ah abuurka - 3-5 godad ceel kasta.
Ka dib markii biqilka abuurka, khafiifinta waxaa la fuliyaa ilaa, sida ay koraan, hal warshad ayaa ka tagay ceel kasta. Ciidda ka hor beerashada waa in ay ahaato xaalad qoyan.
Marka ay koraan, waraabinta si joogto ah ayaa loo sameeyaa, inta badan, sida dhirta uu yahay qoyaan-jecel yahay. Xallinta waajibka ah shuruucda wareegga dalagga.
Daboolida sariiraha leh abuurka beeraha, ka dibna - caleemaha, alaabta ilaalinta madow si ay u joogteeyaan koritaanka abuurka iyo caleemaha, gaar ahaan meelaha leh iftiin gaaban.
U raacsanaanta dhaqamada kale
Dabocase cagaaran ayaa lagula talinayaa in la beero kadib:
Dib-u-dhaji nooca dabocase ee sariiraha isku mid ah waxay noqon kartaa 3-4 sano. Laguma talinayo in la beero dabocase cagaaran ka dib kaabajka, hadhuudhka, dalagga silage. Geedaha, oo u dhow halkaa ee dabaqyada cagaarka cagaaran la doorbido:
Marka aad dooranaysid noocyo kala duwan oo beerto, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xilliga dhirta ee warshadda iyo cimilada gaarka ah ee dhulka. Waxaa jira saddex nooc oo dabocase cagaaran:
Dhaqdhaqaaqa wakhti go'an:
Meelaha leh cimilada qabow, noocyada hore ee bislaada waa in la soo xulo, taas oo ay yeelan doonto waqti ay u bislaadaan ka hor wakhtigii beergooyska. Iyada oo daryeel buuxda, waxaad doorbidi kartaa iyo noocyada xilliga bartamihii. Meelaha leh jawi diirran, noocyada oo dhan waxay ku habboon yihiin beerashada, beerahooda waxay ku kala duwanaan doonaan marka la eego beeritaanka.
Xagee iyo intee in leeg ayaad ka iibsan kartaa abuurka?
Seeds waxaa si toos ah looga iibsan karaa magaalada Moscow iyo St. Petersburg ee dukaamada loogu talagalay beerta, iyo sidoo kale amarro online ah la keeno. Seeds waxaa lagu iibiyaa bacaha warqadaha 2 garaam. Qiimaha 1 kiiba waa kala duwan yahay 9 illaa 35 rubber, iyo celcelis ahaan 22 rodol.
Goormaad u beerataa dhul furan?
Cilaaqaadka saameeya wakhtiga soo degidda:
Dhaqdhaqaaqa muddada farsamo ee noocyada kala duwan;
sifooyinka daryeelka iyo habka beerto;
Marka la eego arimahan, Waqtiga beeritaanka ugu wanaagsan ee warshadu waa sida soo socota:
Bartamaha Russia - dabayaaqadii Abriil ama horraanta May. Xilliga dayrta ilaa xilliga qaboobaha. Haddii dabocase lagu beeray isticmaalka degdegga ah, ka dibna dooro qeybtii ugu horeysay ee beerashada. Wixii kaydinta for jiilaalka - dhamaadka May ama horraanta July.
Urmalada - qeybtii labaad ee Abriil ama dhamaadka Abriil.
Siberia - qeybtii hore ee bisha Abriil, marka heerkulku noqon doono 4 darajo Celsius.
Tilmaamaha Diyaarinta Tallaabo-tallaabo
Beeridda waxaa lagu fuliyaa dhexdhexaad ah (waxoogaa acidic ah) dabacsan, ciidda si fiican u hawo leh, kaas oo ah in la diyaariyo xilliga dayrta.
Ciidda Loamy laguma talinayo beeritaanka.
Limeecada la gooyey waxaa lagu daraa ciidda yar ee aashito, ka dib markii ciidda lagu qodayo qoto dheer oo ah ugu yaraan labaatan sintimitir iyo humus ama digada lagu daro.
Ka dib Bacriminta macdanta waxaa laga dalbadaa ciidda (potassium waa la doorbidi karaa) heerka 30 gram mitir labajibbaaran, ammonium sulphate ama superphosphate ayaa sidoo kale lagu dari karaa.
Humus waxaa lagu daraa qorshaha "1 baaldi halkii mitir labajibbaaran."
Tirada iyo abuurka
Beeraha laga beerto waxa loo adeegsaday mashiinno yar yar ama miisaan qaas ah. Waxaad ku beeran kartaa abuurka gacanta.
Seeds ka hor ka beerto waa in la xalliyo, ka saarto wax aan la aamini karin ama laheyn wax dhaawac ah.
Maalinta ka hor beerashada, miraha waxaa lagu qooyay xal daciif ah oo boric acid ah (1-2%) laba ilaa saddex saacadood. Boric acid waxaa lagu bedeli karaa kobcinta sulphate iyo ammonium molybdate.
Cabbitaanka waxaa loo sameeyaa sida waafaqsan nidaamka 1: 3 (1 qayb oo miraha 3 qaybood oo xal ah).
Ka dib markii lagu qalajiyo abuurka ayaa la qalajiyey.
Wixii dharka abuurka, Ridomil waxaa loo isticmaalaa qiyaasta 0.4 garaam 100 garaam oo miraha ah.
Isku kari ilaa 2 garaam oo miraha 1 mitir oo labajibaaran oo ciid ah.
Radish waa dhir-jecel iyo dhir kulul-jecel. Beerto waxay dooran kartaa bannaan furan oo leh dabacsan, ciidda la miiray, si fiican u iftiimaya badi maalinta. Ha beerin abuurka meelaha moodada ah. Waxaa lagula talinayaa in aan ku dhex beerin meelo hoose - sariiraha la karkariyey dhirta ayaa siin doona dhalid ka sareeya. Heerkulka wanaagsan ee koritaanka waa 15-25 darajo.
Sida loo abuuro: Nidaamka iyo tiknoolijiyada
Mashruucyada soo saarista iyo farsamada:
Sariirta 1 m ballaaran ee sariirta, samee 4 saf 30 cm oo jajab ah iyo 2 cm jeex jeexan oo qoto dheer, Abuuri abuurka kooxo 3-5 gogo ah oo kala dheeraynaya 15 cm. Ka dib beeridda, kula saydhaa humus.
In saf ah oo masaafada ah 50-70 cm ku beeran abuurka si la mid ah leh fasax ah 1-1.5 cm Ka dib markii beero, mulch leh humus. Farqiga u dhexeeya abuurka ka dib khafiifinta waa 15-20 cm.
Marka qashinka looxyo beerto waxay leeyihiin qaab baaritaan ah. Ilaa 5 dhir ayaa lagu beeray god kasta.
Ka dib markii la beero, sariirta waxaa lagu daboolay filim (filimka looma baahna marka lagu beero aqalka dhirta lagu koriyo). Calaamaduhu waxay muuqdaan 4-5 maalmood.
Habeenkii, geedo waxaa lagu daboolay wax madow ah ilaa qiyaastii 7-8 saacadood oo leh aalado iftiin leh, iyo 10-12 - oo leh aag leh maalin yar oo iftiin leh.
Waraabinta Warshadu waxay leedahay qoyaan-jecel, waxaa lagula talinayaa in ay ciidda qoyaan. Waraabinta si dhakhso ah ayaa loo sameeyaa sida lakabka sare ee ciidda qalalan, ka dibna dabacsan. Waxaa loo oggol yahay waraabinta maalin walba ee caleemaha ka soo bixiyaha.
Khafiifinta. Waa nidaam lagama maarmaanka ah, sababtoo ah haddii aan la khafiifin dhirta waxay geli doontaa fallaadhaha iyo ubaxyada. Khafiifinta waxaa la fuliyaa saddex jeer:
Marka caleemaha soo muuqan doonaa 2-3 caleen dhab ah. Inta u dhaxeysa iyaga ka tago farqiga ah ilaa 15 cm, ka saareen caleemaha daciif ah.
Marka asaasiga ah ee dalagyada xididdada la aasaasay, dhirta oo dhan oo aan lahayn midabka cagaaran ee caleenta la saaro.
Marka xididada ay gaaraan cabbirka 5 cm, 1 dhirta ayaa ku haray ololka fogaan ah 20 sentimitir midba midka kale.
Hilling Held laba jeer muddada koritaanka. Markii ugu horeysay - leh muuqaalka dalagyada xididka, mar labaad - marka ay gaaraan cabbirka 3-4 sentimitir dhererka.
Bacriminta. Waxaa la qabtaa ugu yaraan laba jeer muddada koritaanka:
Isla markiiba ka dib khafiifinta koowaad. Sariiraha beerta rusheeyey iyagoo ash budo ah ayaa lagu jajabiyey laabjirta heerka "100 garaam halkii mitir labajibbaaran."
Inta lagu jiro formation of dalagyada xidid. U dilaan 30 garaam oo nitrophoska ah 10 litir oo biyo ah. Haddii inta lagu jiro koritaanka ka mid ah caleemaha caleemaha waxaa lagu arkay, ka dibna caleemaha waxaa la waraabiyaa xal mullein ah ama rusheeyey dambas markii labaad.
Dhibaatooyinka soo socda ayaa suurtagal ah:
Abuurista abuurka aan la qooyey. Xaaladdan oo kale, waqtiga soo ifbaxa caleemaha ayaa labanlaaban, taas oo noqon karta dhibaato ah meelaha leh jawi qabow.
Xalka: beeridda aqalka dhirta lagu koriyo, oo daboolaya sariiraha leh walax madow oo loogu talagalay ugu yaraan 10 saacadood.
Calaamadaha cudurka. The cayayaanka ugu weyn ee abuurka iyo sprouts sprouts: duqsiyo kaabajka iyo boodada jilicsan, slugs.
Xalka: daaweynta sprouts leh gooryaanka la jajabiyey, dambaska, cirbadaha, boodhka tubaakada, isticmaalka abuurka fungicide-lagu daweeyo beeritaanka. Marka cayayaanka sariirta u muuqdaan sariir - si aad sariirta u daboosho. Lime ciidda marka caleemaha kowaad.
Dhirta dhirta. Waxay dhacdaa marka biyo badan oo badan ama ka badan.
Xalka: raaco xeerarka waraabinta - biyaha dhirta marka qallalan koranto, ka dib markii waraabka, furo ciidda. Ka saar dhirta lasiiyay.
Dabocase Cagaaran waa dal aan qabyo ahayn oo waxtar leh, taas oo ka dhigaysa in beeraheeda la awoodi karo oo sahlan in dhul kasta, marka la fiiriyo dhamaan xeerarka beeridda iyo daryeelka. Dalaggu waxaa la goyn karaa dhowr jeer xilli ciyaareedkan, warshadu waxay ku habboon tahay kaydinta muddada dheer waxaana loo isticmaalaa cunto karinta, xayawaanka xoolaha iyo daawada dhaqameed.